ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား ~ Nge Naing
ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား
Saturday, October 31, 2009 Nge Naing 33 comments
ကမ္ဘာပျက်တဲ့အကြောင်း ပြောရင် ကမ္ဘာ စတဲ့အကြောင်းလည်း မပါလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား အရဖြစ်စေ၊သိပ္ပံ အထောက်အထားများအရ ဖြစ်စေ အခုလက်ရှိ ကျွန်မတို့ နေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အစဉ် ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကိုအောင်သာငယ်က ကမ္ဘာမပျက်ခင် တလအလို ကာလမှာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Tag ထားတဲ့ မေးခွန်း (10) ခုကို မဖြေခင် ကျွန်မ အထက်တန်း ပြန်တက်တုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Assignment တွေအထဲက သိရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရရော ဖတ်ဖူးတဲ့ ဘုရားဟောတရားအရပါ ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ Fact ကိုအရင် တင်ပြပြီးမှ မေးခွန်းတွေကို ဖြေလိုက်ပါတယ်။
သိပ္ပံကျောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ အရင်ပြောပါရစေ။ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လေ့လာမှုအရ ဒီကမ္ဘာကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံက စခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာကိုစပြီးနောက် သက်ရှိသတ္တ၀ါဆိုတာ မပေါ်ခင် ဓါတုဗေဒမှာ ကျွန်မတို့ သင်ခဲ့ရတဲ့ သက်ရှိဓါတ်ပေါင်း (organic compound) တွေ ဖြစ်လာဖို့ အချိန်တော်တော် ယူရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး စခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို သံတို့ ကြေးတို့လို ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ တွေပါတဲ့ inorganic compound (သက်မဲ့ ဓါတ်ပေါင်း) တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သက်ရှိတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကာဗွန်၊ အောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် စတဲ့ organic compound (သက်ရှိဓါတ်ပေါင်း) တွေက Evolution နည်းအရ နှစ်ကာလ အတော်ကြာပြီးမှ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလဲနည်းနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။
အောက်စီဂျင်မရှိပဲနဲ့ လူတွေ အသက်ရှင်လို့ မရသလို ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက် မရှိပဲနဲ့ အပင်တွေ အသက်ရှင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါတွေ ဖြစ်လာပြီးမှ အဲဒီက ဓါတ်ပေါင်းတွေက တဖန် တရွေ့ရွေ့ပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ ဘက်တီးရီးယားလို သေးငယ်တဲ့အရွယ် သတ္တ၀ါကနေ အကြီးတွေ အဲဒီကတဆင့် ဒီလိုပဲ တရွေ့ရွေ့ ထပ်ပြောင်းရင်းနဲ့ လူနဲ့တူတဲ့ အကောင်တွ ဖြစ်လာပြီးမှ လူသားအဆင့် ရောက်ဖို့က အများကြီး ထပ်ကြာသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးအရ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ရခဲ့လှတဲ့ အရာတွေထဲမှာ လူ့အဖြစ်ဟာ ရခဲတယ်လို့ ဘုရားဟောခဲ့တာဟာ သိပ္ပံအထောက်အထားအရလည်း တကယ်ကို မှန်ကန်နေပါတယ်။
ဒီလိုသက်မဲ့ ဓါတ်ပေါင်း ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ကမ္ဘာကို နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံက စပြီး သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃.၈ ဘီလီယံကမှ စတင်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ လူ၊ မျောက်အပါအ၀င် Hominidae family လို့ခေါ်တဲ့ လူနဲ့တူတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ်မှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး သွားနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် နှစ်သန်းပေါင်း ၂၀ ခန့် Cainozoic ခေတ်မှာမှ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ လူနဲ့ လူလိုသတ္တ၀ါတွေမတိုင်ခင် နောက်ဆုံးခေတ် Mesozoic ခေတ်မှာ နှစ်သန်းပေါင်း ၁၈၀ ခန့်က ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေ ဒီကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။
ဒီမတိုင်ခင် ခေတ်အဆက်ဆက်ကို လေ့လာပါက Palaeozoic ခေတ်မှာ သန်းပေါင်း ၆၀၀ ခန့်က ကျောရိုးမဲ့သတ္တ၀ါတွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၄၀ ခန့်က မေးရိုးပါတဲ့ ငါးမျိုးတွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့်က အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ကျောရိုးရှိပြီးသား တွားသွားသတ္တ၀ါတွေ။ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၅၀ ခန့်က ဒိုင်နိုဆော နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေ ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများရဲ့ သက်တမ်းကို တွက်ချက်ပြီး သိရပါတယ်။ သိပ္ပံ အထောက်အထားများအရ ခေတ်တခုခုကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီးပြီး နှစ်သန်းပေါင်း အတော်ကြာ အချိန်ပြန်ယူပြီးမှ Organic compound တွေ ပြန်ရ၊ သတ္တ၀ါတွေ ပြန်ဖြစ်ပြီး Evolution ဆိုတဲ့ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲပြီးမှ သတ္တ၀ါကို အသစ်ကနေပြန်စတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ပြီးလို့ နှစ်သန်းနဲ့ ချီပြီးမှ လူသတ္တ၀ါတွေကို ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသမျှ သိပ္ပံအထောက်အထားများသာ ဖြစ်ပြီး နှစ်သန်းပေါင်း ၆၀၀ မတိုင်ခင်က သက်ရှိတွေရဲ့ အထောက်အထားကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ ကြားကာလတွေမှာလည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေ မတွေ့သေးတာ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုံးစုံကို သိတော်မူခဲ့တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကတော့ အကုန်လုံးကို သိသွားခဲ့ပေမယ့် ဟောဖို့လိုအပ်တဲ့ တရားတွေကိုပဲ ဟောခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရားက သိပ်ပြီး မကွာခြားလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက အဖန်တလဲလဲ မပြတ်ပျက်စီးလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် ဖြစ်တဲ့ သံသရာကြီးဟာ သိပ်ရှည်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာဟာ မရေတွက်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါင်း မြောက်များစွာထဲက တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဟောထားခဲ့ပါတယ်။ အရင်အရင် ကမ္ဘာတွေတုန်းကလည်း လူသတ္တ၀ါတွေဟာ တကွေ့ကွေ့မှာ ကြုံဖူး၊ သိဖူး၊ သားအမိ၊ ချစ်သူ၊ မောင်နှမ မဖြစ်ဖူးသူ တယောက်မှ မရှိခဲ့လို့ သတ္တ၀ါတိုင်း (တိရိစ္ဆာန်အပါအ၀င်) ကို မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမလို မေတ္တာထားဖို့ ဟောခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပျက်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း ရေခဲဖုံးလွှမ်းခြင်း စတာတွေအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပြီး လုံးဝ ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပဲ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်နဲ့ နာလိုက် နလံပြန်ထလိုက် ဖြစ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် အခုရေပေါ်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကုန်းမြေတွေက ရေအောက် ပြန်ရောက်ပြီး ရေအောက် ရောက်နေတဲ့အပိုင်းက ကုန်းပေါ် ပြန်ရောက်တာမျိုး၊ ဆက်နေတဲ့ ကုန်းမြေတခုခုဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်းအသေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ရေအောက်မြှုပ်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အခုသဲကန္တာရ ရှိတဲ့နေရာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် သန်း ၄၀၀ ခန့်က ရေအာက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ တကယ်လုံးဝ ပျက်စီးခြင်းဆိုတာလည်း တချိန်ချိန်မှာ ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီး လုံးဝမပျက်စီးခင် ဒီကမ္ဘာမှာ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားတဆူ ပွင့်ဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ ဟောထားတဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ လုံးဝပျက်စီးသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။
နောက်တချက်က အရိမေတ္တယျ ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာ လူတွေရဲ့ သက်တမ်းက အနှစ်တသောင်း ရှိတယ်လို့သိရတော့ အဲဒီအခြေအနေကို ရောက်ဖို့ အချိန် အတော်ကြာဦးမှာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ အခုဘ၀မှာတော့ နောက်ပွင့်မည့် ဘုရားကို တွေ့ရဖို့ မရှိသေးဘူး။ ဘုရားမပွင့်ခင် ကမ္ဘာကို ဆေးကြောသန့်စင်ရင်လည်း သာသနာ ရှင်သန်နေတဲ့အထိ သူတော်ကောင်းတွေဟာ ရှိနေဦးမှာဖြစ်လို့ သာသနာကွယ်ပြီး အတော်ကြာ လူတွေဟာ အကျင့်စာရိတ္တတွေ လုံးဝပျက်ပြားနေတဲ့ အချိန်မှသာ ကမ္ဘာပျက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာက အနှစ် ငါးထောင်တောင် မပြည့်သေးဘူး အနှစ်ငါးထောင် ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း သာသနာ ပျက်ပြီးမှ ကမ္ဘာ တခုခု ဖြစ်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း သိထားတယ်။ အခုထိ ဝေနေယျ သတ္တ၀ါတွေအတွက် နေ့တိုင်းမေတ္တာပို့ပေးနေတဲ့ လူနဲ့ ရဟန်း သူတော်ကောင်းတွေ ရှိနေဆဲမို့ သာသနာက ရှင်သန်ဆဲ၊ ဘာသာခြားတွေမှာလည်း စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေဆဲဆိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း မီးစာကုန် ဆီခမ်းမှ သက်တမ်းကုန်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာက အခုလာမည့် ၂၀၁၂ မှာ ပျက်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ၂၀၁၂ ဆိုတာ သိပ်ကို နီးနေပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရတွေက ဒီကိစ္စကို အရေးတကြီးထားပြီး ဘာကြောင့် မဆွေးနွေးနေကြတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ အခြေအနေကို အမှန်တကယ် တွန်းအားပေးနေတဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ ကမ္ဘာပူနွေးလာမှုကြောင့် ၀င်ရိုးစွန်းဒေသ ရေခဲ ပျော်လာမှုနဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာရေ မြင့်တက်လာမှု၊ သဘာဝတွင်းထွက် စွမ်းအင်တွေက ရတဲ့ လောင်စာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်သိမ်းပြီး ဇိဝလောင်စာ တီတွင်သုံးစွဲမှု စတဲ့ အဝေးကြီးကြာမှ ကမ္ဘာပျက်နိုင်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက အဓိက ဆွေးနွေးနေကြတယ်။
သိပ္ပံဘာသာ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း Assignment တွေမှာ ဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ် ဆိုတာပဲ Research တွေလုပ်ပြီး ဖေါ်ပြနေရတယ်။ မကြာခင်ဖြစ်မှာ ဖြစ်လာတော့မယ့် နောက်သုံးနှစ်ကြာမှာ ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းအရာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ဆွေးလည်းမဆွေးနွေး အရေးလည်းမထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၂ ကိစ္စဟာ ဘာမှ အခြေအမြစ်မရှိတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ထဲကို လမ်းကြောင်းမှားပြီး ၀င်လာနေတယ်လို့ ကြားထားတဲ့ ဂြိုလ်တခုဆိုတာကိုလည်း သပ္ပံပညာရှင်တွေက တနည်းနည်းနဲ့ ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်အောင် လုပ်ထားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
အကိုအောင်သာငယ်ရေ Tag post ကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူက ရှိသေးတယ်လို့ သ၀န်မတိုနေနဲ့နော့်။ Fact နဲ့ Imagination ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးရတော့ ပို့စ်က သာမန်ထက် နည်းနည်း ရှည်သွားတယ် ဆောရီးပါ။
Posted in: Tags,ကျန်းမာရေး/ဇီဝသိပ္ပံ,ဘာသာရေး
October 31, 2009 at 9:44 PM Reply
အနှစ်မဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ အော်ဂလီဆန်စရာ စကားလုံးတွေ လက်ခမောင်းခတ်နေချိန်မှာ ဒီလို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စာမျိုးဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေနပ်တယ်။ တကယ် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ။
November 1, 2009 at 1:23 AM Reply
ဒီလို tag post မှာတောင်မှ မမ စာတွေက ဗဟုသုတ ရစရာတွေ တွေးစရာတွေ အများကြီးပါနေပါသေးတယ်။
Geological terms တွေ ကို စနစ်တကျ လေ့လာပြီး..
ရေးသွားတာ ချီးကျူးတယ် ငါ့တူမရေ့....
ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား အော်နေတဲ့..ဘဘကြီးတွေ ..
November 1, 2009 at 5:29 AM Reply
သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် ရေးထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမရေ့...
တကယ်တော့လည်း ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ အကိုလည်း မယုံကြည်ပါဘူး...
November 1, 2009 at 2:44 PM Reply
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့… ။ Ma Nge Naing ရဲ့ ဂုဏ်ယူချင်စရာကိုဖတ်မိရင်း… အဇာတသတ်မင်းက “မိမိရဲ့ အာဏာရမက်ကြောင့် တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ မိမိရဲ့ ဖခင်ကိုသတ်ခဲ့မိကြောင်း” မိမိရဲ့ အပြစ်ကို ဘုရားရှင်ထံ ၀န်ခံတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ တန်ဆောင်မုန်လပြည့်ည … ။ “မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ဟု ရှုမြင်၍ တရားနှင့် အညီ ကုစားခြင်း, နောင်မဖြစ်စေရန် စောင့်စည်းခြင်းတို့ကို သာသနာမှာ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း” လို့သတ်မှတ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့တယ်။ အပြစ်ကို အပြစ်လို့ အသိအမှတ်မပြုသရွေ့ ၀န်မခံသရွေ့ ဒီလူ, ဒီအဖွဲ့အစည်း, ဒီနိုင်ငံမှာ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးနေတဲ့ လူ, အဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံမှာ သာသနာဟာ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာတည်ပါစေ…. ။
November 1, 2009 at 4:17 PM Reply
ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖတ်ရလို့ လေးစားပါတယ် မငယ်ရေ
November 1, 2009 at 5:39 PM Reply
အစ်မ အဲဒီအချိန်လောက်ဆို သူ နောင်တရလောက်ပါပြီလို့ သိပ်တော့ မထင်နဲ့နော်။
November 1, 2009 at 5:54 PM Reply
သမ္မာဒိဌိအမြင်နဲ့ ရှင်းပြသွားတာ အားရကျေနပ်လှတယ်။
ပေ့ါပျက်ပျက်အတွေးရှိတဲ့ ဘာသာမဲ့သူတွေရဲ့ အမြင်ကို စာဖတ်သူတွေ နားယောင်သွားမှာ စိုးနေချိန်မှာ
အမရဲ့ လေးနက်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် (ဒါနသီလလောက်သာ သိတဲ့ မိရိုးဖလာတွေကို မဆိုလိုပါ) အဘိဓမ္မာသဘောတရားတွေကိုပါတင်ပြသွားတာ အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ စာပေအရေးအသားလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
လာလည်လည်ပြီး ဖတ်သွားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို တခါမှ မရောက်ဖူးပဲနဲ့ အခုလို လာလည်ပြီး အားပေးစကား ပြောသွားတဲ့ ကိုမိုးမောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမဆို တယောက်နှင့်တယောက် အကြိုက်ချင်း ထပ်တူ မကျနိုင်တဲ့အတွက် မိမိမကြိုက်တဲ့ စာတွေကိုလည်း တခြားသူတွေ ကြိုက်နေရင် လေးစားမှုပေးတဲ့ အနေနဲ့ ထိခိုက်စေတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရှောင်သင့်တယ်လို့ ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
သိင်္ဂါကျော်၊ လေးလေးNai နဲ့ ကိုဆောင်းယွန်းလတို့ရေ ဗဟုသုတတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ပါတယ်ဆိုလို့ ဒီပို့စ်အတွက် အချိန်နည်းနည်း ယူပြီး အချက်အလက် ပြန်ရှာခဲ့ရ ကျိုးနပ်ပါတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်က ကျွန်မလည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးအဆင့်ထိ စိတ်ကူးယဉ်လို့ တတ်တယ်ဆိုတာ ပြထားတဲ့ အချက်တွေကိုတော့ ဘာမှ ပြောမသွားဘူး။
ကိုဧရာရေ ကျွန်မက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်ကိုပဲ သိပြီး အဲဒါ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ဆိုတာ အခုကိုဧရာ ပြောမှပဲ သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Rita ရေ- ဘာမဆို အရှိန်ကုန်နဲ့ ပြန်ကျတာပဲ ဆိုတဲ့ ရုပဗေဒ နိယာမ တခုရှိတယ်လေ။ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ခါနီးမှာ သူလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ တမလွန်အတွက် ရိက္ခာလိုမယ်လေ။ အဲဒီအရှိန်က ဒီအချိန်မှု မကျလို့ ဘယ်အချိန်မှာ သွားကျမလဲ။
November 2, 2009 at 6:07 AM Reply
မနှစ်က အချိန်တခုမှာ Yahoo News ကလားမသိဘူး သတင်းအတိုလေးတစ်ခုကနေ အစပြုပြီး ၂၀၁၂ ideas တွေကို စ သတိထားမိခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ google ကနေ ရှာဖွေပြီး သတင်းတွေဖတ် Youtube မှာ သူတို့ ပြထားတဲ့ ဗွီဒီယို အတော်များများကိုလည်း လျှောက်ရှာကြည့်မိတယ်။ ဆက်စပ်ပြီး evolution တွေ astronomy နဲ့ ပတ်သက်တာအချို့ကို ဆက်ဖတ်မိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ အတွက် ပြောဆိုယူဆချက်တွေနဲ့ မတိုက်ဆိုင်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိထားမိခဲ့တယ်။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ၂၀၁၂ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားက ထွက်လာခါနီးဆိုတော့ (အလေးအနက် ယုံကြည်လို့မဟုတ်တောင်မှ) စိတ်ဝင်စားစရာ တခုအနေနဲ့ ဆူဆူညံညံ ပိုပြီး ပြောကြဆိုကြ ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ internet ထဲမှာ count down လုပ်နေကြတဲ့ website အတော်များများလည်း တွေ့တယ်။ လူတွေကတော့ လုပ်စရာရှိတဲ့ ပုံမှန်ဘ၀တွေထဲ လည်ပတ်ဆဲပါလေ။
စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ အားထုတ်မှုကို လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
November 2, 2009 at 8:03 AM Reply
November 2, 2009 at 9:21 AM Reply
နောက်ထပ် လာဖတ်သွားကြတဲ့ ကိုအိုးဝေနဲ့ မပန်ဒိုရာနဲ့ အေးမြနှင်းရည်တို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မပန်ဒိုရာ မှတ်ချက်ကို ဖတ်အပြီးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ပို့စ်မှာ ထပ်ဖြည့်ဖုိ့ တခုခု လိုလိမ့်မယ်လို့ သတိထားမိတာနဲ့ အောက်က စာနှစ်ပိုဒ်ကို ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်တော့ မသက်ဆိုင်ပေမယ့်မပန်ဒိုရာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကိုးအကားတွေက တခြား သာသာဝင်တွေအတွက် အနှစ်သာရ မရှိနိုင်၊ အကျုံးမ၀င်နိုင်လို့ ဘာသာရေးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်တာကို ကျွန်မနည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကြော်ငြာကို ကိုအိုးဝေအောင် ဘလောဂ်မှာ ကျွန်မ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်ရင် မဖြစ်ခင် ကြိုရှောင်လို့ပဲ ရနိုင်လိမ့်မယ်၊ အဲဒီမှာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို တိုက်မိမှတော့ တိုက်မိတဲ့ရှိန်၊ ပေါက်ကွဲတဲ့ အရှိန်တွေကြောင့် လျှပ်စစ်လှိုင်း လေထုဖိအား၊ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားတွေ ဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း ဘယ်လိုမှ မဟုတ်နိုင်တော့လို့ ဒီဗွီဒယိုထဲကလို ဖြစ်တဲ့အချိန်မှ လေယဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးလို့ ဘယ်လိုမှ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ပရိတ်သတ် စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ပြထားတာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါထင်တယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၂ ဆိုတာ သိပ်ကို နီးနေပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရတွေက ဒီကိစ္စကို အရေးတကြီးထားပြီး ဘာကြောင့် မဆွေးနွေးနေကြတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ အခြေအနေကို အမှန်တကယ် တွန်းအားပေးနေတဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ ကမ္ဘာပူနွေးလာမှုကြောင့် ၀င်ရိုးစွန်းဒေသ ရေခဲ ပျော်လာမှုနဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာရေ မြင့်တက်လာမှု၊ သဘာဝတွင်းထွက် စွမ်းအင်တွေက ရတဲ့ လောင်စာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်သိမ်းပြီး ဇိဝလောင်စာ တီတွင်သုံးစွဲမှု စတဲ့ အဝေးကြီးကြာမှ ကမ္ဘာပျက်နိုင်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက အဓိက ဆွေးနွေးနေကြတယ်။ သိပ္ပံဘာသာ တက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း Assignment တွေမှာ ဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ် ဆိုတာပဲ Research တွေလုပ်ပြီး ဖေါ်ပြနေရတယ်။ မကြာခင်ဖြစ်မှာ ဖြစ်လာတော့မယ့် နောက်သုံးနှစ်ကြာမှာ ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းအရာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ဆွေးလည်းမဆွေးနွေး အရေးလည်းမထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၂ ကိစ္စဟာ ဘာမှ အခြေအမြစ်မရှိတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။
November 2, 2009 at 2:59 PM Reply
November 3, 2009 at 1:31 AM Reply
UN by consensus? may be on the day after tomorrow.. :D
November 3, 2009 at 8:15 AM Reply
သေချာလေ့လာပြီးရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ အမှတ်တရလေးများဘလော့ဂ်ကတဆင့် မင်းလင်္ကာရဲ့ ပိုစ့်လေးမှာလဲ ၂၀၁၂အကြောင်းလေး ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
အစကတည်းက ကိုယ့်ကမ္ဘာကြီး ဒီလောက်မြန်မြန်ပျက်လိမ့်
မယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ ပျက်ခဲ့ရင်လဲ မကြောက်ပါဘူးအမရေ..
ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ပျက်ချိန်တန်ရင် ပျက်ကြရမှာပါပဲ။
ပေါ့လေ။ ကျောင်းတဘက်၊ အလုပ်တဘက်နဲ့ သူများတိုင်းပြည်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေကြား တနေ့လုံးနေရတာတွေများ
တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုယ့်ဗမာ
စရ၊ နောက်ရတာ ကျွန်တော်ပျော်လာတတ်တယ်
အမလိုပိုစ့်လေးတွေကို ကြိုက်သလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးထားတဲ့ အခြားပိုစ့်လေးတွေကိုလဲ ကျွန်တော်တကယ်နှစ်သက်မိပါတယ်ဗျာ။
November 3, 2009 at 8:51 PM Reply
AATO, Anonymous, ဖြိုးဝေနဲ့ Craton တို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AATO ရေ- အခြေအနေတခုကို ရင်ဆိုင်ရမည့် အတူတူ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ပြီး ရင်ဆိုင်ရတာနဲ့ စာရင် စိတ်အေးအေး ထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
Anonymous ရေ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း ကမ္ဘာပျက်ပြီး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည့် UN ကိုပဲ ဆိုလိုတာပါ။ အခုလက်ရှိ UN ကတော့ ဗီတိုအာဏာကို ဘယ်တော့မှ ဖျက်သိမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။
ဖြိုးအောင်ရေ အစ်မလည်း စာဆိုရင် အတော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်။ ကောင်းမကောင်းဆိုတာ ဖတ်သူရဲ့ နှစ်ခြိုက်သဘောကျမှု အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တာ ရှိရင်တောင်မှ သူများကြိုက်တာကို လေးစားမှု ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Craton ရေ ဗဟုသုတတွေ ရသွားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မက Emotion တွေ Stress တွေ သိပ်များတဲ့သူပါ။ အသက်အရွယ်ကလွဲပြီး စိတ်ဓါတ်က Craton ထင်သလို မရင့်ကျက်သေးပါဘူး။
November 4, 2009 at 1:32 PM Reply
ညီမရေ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ နဲ့တင်ပြချက် ကို အမ လက်ကမ်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ထက်မြတ်တဲ့အတွေးအမြင်ဟာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပဲ ညီမ
အမ အခြားတာဝန်တွေ နဲ့ မအား လို့ဝင် မရေးနိုင် မပြောနိုင်ပေ မဲ့ညီမလို ရှင်းလင်းတင်ပြ နိုင်တဲ့ သူတွေ ကို ဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမ
November 4, 2009 at 7:46 PM Reply
စာရေးသူ ရဲ့ ရင့်ကျက်မှူနဲ့စဉ်းစားညာဏ်ကို
ကို ဒီလို မျိုးမှာတွေ့လိုက်နိုင်တာပါပဲ :) :)
November 4, 2009 at 7:47 PM Reply
ကို ဒီလို Post မျိုးမှာတွေ့လိုက်နိုင်တာပါပဲ :) :)
November 5, 2009 at 4:12 AM Reply
ခရစ်ယန်ဘာသာနဲလဲ 2012 မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ မငယ်နိုင်ရေးသလို ဗုဒ္ဓဘာသာ နောက်ဘုရားပွင့်ပို့ရှိသလို ခရစ်ယန်မှာလဲ Rapture, Jesus Second Coming တို့ရှိပါသေးတယ်။
That's fundamental christian doctrine but I am not sure what False-christian-theory and Liberal-christian-theory are saying..
There are many of these false types of denominations in the presence..
November 8, 2009 at 5:43 PM Reply
January 3, 2010 at 4:44 AM Reply
January 3, 2010 at 4:45 AM Reply
အနာဂတ်တွင် ဖြစ်မည်ပျက်မည်ဆိုသောအရာကို ကြိုတွေးပြီး စိတ်ပျက်နေလည်း မထူး။
ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ သေနိုင်သည်။
သေလျင်ကော အားလုံးပြီးသွားမှာလား။ သံသရာခရီးသည်အဖို့ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရအုံးမည်။
သတိစိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ခြင်းသည် အမှောင်ကို ခွင်းနိုင်သည်။
အမှန်တရားကို သိမြင်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးအေးချမ်းရာ၏
မမြဲသောဤ ခန္ဒာသည် အချိန်မရွေး ပျက်စီးနိုင်သည်....
ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုသည့် မာယာ ပြက္ခဒိန် နောက်ဆုံးနေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်
မငယ်နိုင် တင်ပြထားတဲ့ ဒီ ပို့စ် "ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား" ဟာ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပို့စ်မှာ မငယ်နိုင်က တွေးအားကောင်းကောင်း၊ ရေးအားကောင်းကောင်းနဲ့ သိပ္ပံပညာ ရှုထောင့် (ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ရှုထောင့်) ကရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်ကပါ သုံးသပ်ပြထားတာ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။
မငယ်နိုင်ရဲ့ ဒီပို့စ် "ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား" (October 31, 2009 ရက်မှာ တင်တဲ့ပို့စ်) ကို
ဒီပို့စ် နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မငယ်နိုင် နောက်ထပ် တင်ထားတဲ့ ပို့စ် တခုနဲ့ တွဲပြီး ဖတ်သင့်ပါတယ်။
မငယ်နိုင် နောက်ထပ် တင်ထားတဲ့ ပို့စ် - "နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား"
(June 29, 2011 ရက်မှာ တင်တဲ့ပို့စ်) http://bit.ly/RFbd8r နဲ့ တွဲပြီး ဖတ်သင့်ပါတယ်။
နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား says:
December 21, 2012 at 12:26 PM Reply
(ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
မငယ်နိုင်ရဲ့ ဒီပို့စ် "ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား" နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့
မငယ်နိုင် နောက်ထပ် တင်ထားတဲ့ ပို့စ် - "နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား" http://bit.ly/RFbd8r
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာပျက်မှာ မဟုတ်ပါ (ဂရမ်မာကြာရွက် ရှင်းပြထားသည့် အချက်အလက်အမှန် အချို့) says:
(ခေါင်းစဉ်ကို click လိုက်ရင်
မငယ်နိုင် ရဲ့ "နောက်နှစ် (၂၀၁၂ ခုနှစ်)၊ ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား" ပို့စ်
http://bit.ly/RFbd8r ကို ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အဲဒီ "ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်မလား" ပို့စ် အောက်က Comments မှာ ပို့စ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မှတ်ချက်ပေးသူ "ဂရမ်မာကြာရွက်" က
၁-၇-၂၀၁၁ ရက်နေ့က ရှင်းပြထားတဲ့ အချက်အလက်အမှန် တချို့ကို ပြန်ကူးပြီး အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(July 1, 2011 11:10 AM)
မနေ့ (၃၀-၆-၂၀၁၁ ရက်) က ဟေလီကြယ်တံခွန် အကြောင်း ကွန်မန့် ရေးပြီး အချိန်မရလို့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက် အမှန်တွေကို မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး။
December 21, 2012 at 1:29 PM Reply
January 5, 2013 at 6:46 PM Reply
January 5, 2013 at 6:49 PM Reply
January 5, 2013 at 6:53 PM Reply
January 5, 2013 at 6:55 PM Reply